China PE PPR pombi yekugadzira mutsetse Kugadzira uye Fekitori | Jiarui
Iyo extruder yeHDPE pombi mutsara inotora yakanyanya kushanda sikuru & dhiramu, iro giya riri kuomesa mazino gearbox neayo yega-lubrication system. Iyo mota inotora Siemens standard mota uye kumhanya kunodzorwa neABB inverter. Iyo yekudzvanya sisitimu inotora Siemens PLC kudzora kana bhatani kutonga.
Iyi PE pombi mutsetse inoumbwa ne: zvinhu charger + Imwe sikuruu extruder + pombi muforoma + vacuum calibration tangi + kumwaya kutonhodza tangi x 2sets + matatu caterpillar dhonza-off muchina + isina-guruva aricheke + stacker.
Iyo tangi muviri wevharuvhu calibration tangi inotora maviri emakamuri mamiriro: iyo yekuyera calibration uye kutonhora zvikamu. Ose ari maviri matangi emuchadenga uye kumwaya kutonhora tangi kutora isina simbi 304 #. Iyo yakanakisa vhoriyamu sisitimu inosimbisa iyo chaiyo saizi yepombi; kupfapfaidza kutonhora kunovandudza kugona kwekutonhora; Auto mvura tembiricha yekudzora system inoita kuti muchina uwedzere kungwara.
Muchina wekukwevera weiyi pombi mutsara unotora mhando dzemhashu. Iine kodhi yemamita, inogona kuverenga iyo urefu hwepombi panguva yekugadzirwa. Kucheka system kutora isina-guruva aricheke ne PLC yekudzivirira system.
Inogona kugadzira HDPE mapaipi ane dhayamita ye16mm kusvika 1200mm. Nemakore mazhinji eruzivo mukuvandudza uye dhizaini yemuchina wepurasitiki, iyi HDPE pombi extrusion yekugadzira tambo ine yakasarudzika dhizaini, inove dhizaini, inonzwisisika dhizaini dhizaini uye yakavimbika kutonga kuita. Zvinoenderana nezvakasiyana zvinodiwa, iyo HDPE pombi inogona kugadzirwa seyakawanda-musara pombi extrusion yekugadzira mutsara.
Iyi pombi extrusion mutsetse inotora simba rinoshanda rakasarudzika sikuruu extruder ine yakakosha muforoma, kugadzirwa kwekugadzira kupfuura imwechete-yekumhanyisa yekugadzira tambo yakawedzera ne30%, simba rekushandisa rakaderera pane 20%, zvakare zvinobudirira kudzikisira vashandi mari. Kugadzirwa kwePI-RT kana PE mapaipi kunogona kuwanikwa nekushandurwa kwakakodzera kwemuchina.
Muchina wacho waigona kutora PLC kudzora uye kupenda hombe sikirini yemvura yekristaro yekuratidzira skrini inoumbwa neyekudzora system, mashandiro ari nyore, kubatana mubhodhi, muchina kugadziridza, otomatiki mhosva alarm, iyo yose mutsara kuonekera, kugadzikana uye kwakavimbika kugadzirwa.
PPR pombi yekugadzira mutsetse ine SJ yakateedzana single screw extruder, chakuvhuvhu, bhokisi rekutsvaira, bhokisi rechipfira, tarakita, muchina wekucheka, kutendeuka furemu zvichingodaro. Inonyanya kushandiswa kuburitsa PPR, PE-RT inopisa uye inotonhorera mapaipi emvura, nezvimwewo. Inogadzirirwawo nemamwe ma extruder uye maforoma akasiyana, ayo anogona kuburitsa PPR mapaipi maviri-eiri, PPR multilayer mapaipi, PPR girazi fiber yakasimbiswa pombi, nezvimwe. .
（Makirogiramu / h）
Pashure: PVC pombi yekugadzira mutsara
Zvadaro: PVC Yakarukwa Hose Extrusion Line